Bt bauma China 2016 iNgqina Indlela XCMG kaThixo "Akubonakali Champion" Udlala "lokuqamba" ngumdlalo - China Shanghai Vukile
Bt bauma China 2016 iNgqina Indlela XCMG kaThixo "Akubonakali Champion" Udlala "lokuqamba" Chess
Umhla olushicilelwe: Feb-03-2017 Funda le nombolo: 241
Njengoko phezulu umcimbi oomatshini zobunjineli, "bauma China" (International Trade Fair for Imitshini Construction, Building Material Machines, Machines Mining and Izithuthi Construction) nje kuphela ibonisa ihlabathi iimveliso kwimarike yaseTshayina ephandiweyo zikhuliswe zisekelwe kumava client Chinese kodwa Uqamba jikelele ukuba ekuthwaleni uxanduva ukuzityhala uphuhliso elizayo ngobugcisa, ubulumko unyawo. Kule enkundleni apho iingxilimbela oomatshini zokwakha jikelele angi omnye komnye, XCMG, njengenkokheli imiyalelo ezintsha nophuhliso lwamashishini neentsingiselo kuzo zonke bakurholela edlulileyo, kwakhona inika declaration yayo ngokusesikweni - 'unyawo, lemveliso ekrelekrele kuwe ". Ukutolika ngcono lo mbandela, ngaphandle amalungiselelo amangalisayo engundoqo cluster isakhelo show, nayo XCMG debuts intsapho amacandelwana engundoqo kunye namacandelo - "nentshatsheli ongabonakaliyo" phakathi kwezixhobo noomatshini.
Ekrelekrele, amandla-ukugcina kunye nokusebenza na iindawana injini engundoqo kunye amacandelo XCMG amkele ukwaphula ipatheni ekupheleni eliphezulu phantsi omtsha eziqhelekileyo. "Ukwakhiwa ishishini oomatshini China elisombulula 90% kwemiba. Undoqo ukoyisa yokugqibela-10%. Kufana nje onyuka ezingamakhulu ambalwa yokugqibela Mount Everest. Oku kufuneka ngamandla ngakumbi, imali engakumbi, ubulumko ngakumbi kunye italente ngakumbi. "Kanye" Ukunyuka Mount Everest Theory "ocetywayo nguMongameli & nguNobhala leKomiti Party Wang Min, XCMG sele iqalile ukuba babeke" "chess lokuqamba iinxalenye engundoqo kunye namacandelo ngaphambili. Phakathi kwabo, XCMG hydraulics Co., Ltd., inxalenye & icandelo lwamashishini owasekwa ngo-1975, kuxhomekeke akukho ezinye izinto ngaphandle iminyaka emashumi mane phantsi umsebenzi ukudlala ichess nokwenza izinto hydraulic of XCMG thaca lonke China, nokuba zithunyelwa ngokwamaqela ukuba phantse ngaphezu kwamazwe-20 kunye neendawo ezifana eYurophu, eMelika, Russia, Japan ngokusekelwe kuphando nophuhliso lweemveliso obuphezulu evezwe ngu nobukrelekrele, okonga umbane kunye nokusebenza, ukhanye phakathi izakhelo eziphambili koomatshini lwehlabathi ezahlukeneyo zokwakha, bume ucoceko oomatshini, imigodi oomatshini, izixhobo inqanawa kunye "nentshatsheli ongabonakaliyo 'ezifana yaye ekugqibeleni zibe phambili uphuhliso inxalenye engundoqo ozimeleyo kunye noshishino candelo.
Iimveliso 'Valve "batyhobozele ipatheni ekupheleni eliphezulu-with" ukrelekrele "
Njengoko ingqiqo ka "lemveliso ekrelekrele" batsho, ubugcisa ezikrelekrele okuzenzekelayo zedijithali kokuba kakhulu isicelo kwishishini lokuvelisa, oqinisekisa olunye nje kuphela umgangatho stableness kweemveliso kuphucula impumelelo nokusebenza kodwa ivula indlela entsha imveliso ukufana ukuphelisa kunye nexabiso brand ukwanda. Yi kakhulu Ngokufumana amathuba, iindawo engundoqo kunye amacandelo XCMG ingqalelo uphando kunye nophuhliso kwi ekupheleni phezulu-ifildi lokuvelisa element hydraulic. Njengoko XCMG wafumana amashishini ezimbini yaseYurophu - AMCA ukusuka Netherlands kunye FT waseJamani, kunye nokusekwa European Research Centre of XCMG, i "jikelele enxibelelanisayo + ngokuzimeleyo ezintsha" R & D ecosphere losapho olupheleleyo lweziqalelo hydraulic uthatha imilo.
Emva kokuba dedusted imizuzwana 15 ishawa emoyeni, nithe nangena close-uhlobo workshop rhoqo-lobushushu. Nangona kaloliwe koomatshini ucula ezindlebeni, khangela ngeenxa zonke, kunye nabasebenzi abaninzi kangaka umsebenzi ukuze babonwe, kuba ibonelelwe kwinqanaba kwimveliso oluzenzekelayo kakhulu. izixhobo processing Superior ithatha uninzi lwabasebenzi. abasebenzi eziliqela kwisiza nokuba iimveliso Polish phantsi iithotshi okanye ukubamba izixhobo uvavanyo ngenyameko 'ukufumanisa "iimveliso ezifana koogqirha ... Ngesiquphe, kunjani' ukuba lemveliso iimveliso mveliso kodwa nangokukrola wobugcisa. Oku umgca wemveliso element ngesanti kubunzulu baphantsi of XCMG hydraulics Co., Ltd. izivalo hydraulic ezahlukahlukeneyo kuhlu mboniso ababezalelwe kulo mgca kwimveliso.
Ukuze kuphunyezwe zonke-macala impumelelo entsimini yiHydraulic, ngowe-2012, XCMG wathabatha izenzo kwaye ziyafikelelwa abenzi ezimbini yaseYurophu owaziwayo hydraulic - FT baseJamani AMACA ukusuka Netherlands; ngaxeshanye, XCMG imali 360 euro to ukucwangcisa i R & D iziko yaseYurophu eJamani ingqalelo imiba engundoqo kunye technologies ezingundoqo ezifana umba yiHydraulic, impompo, iimoto kunye nolawulo ezikrelekrele. Phantsi kwale ubeko onamandla, XCMG hydraulics kwasekwa closed jikelele-ezinxityelelanisiweyo, olugunyazisa ezinxulumene anikane inkxaso ubudlelwane nentsebenziswano kunye FT waseJamani, AMACA esuka e-Netherlands, European Research Institute kunye ezifana ukuze ngamandla ngamandla silwa owoyisayo ekupheleni eliphezulu-core iindawo kubunzulu baphantsi komhlaba kunye namacandelo. Kulo mboniso, zombane rotary ababetheki vana na isiphumo afunyenwe kolu phando kunye nophuhliso ecosphere.
Njengoko wenjineli abanamava R yaseYurophu & D Centre, uGqirha Fei Kaoyin, ukucombulula zooswingi inyathelo ka milenge, bathelela "CES isebenze" Project leyo ngokukhethekileyo ejoliswe ekuphuculeni operability, ezonga umbane yokusebenza stableness. Indlela ukuhlaziya intshukumo umqamelo? UGqirha Fei Kaoyin kanye amalungiselelo inkomfa umbono izihlandlo eziliqela. Ukuze ebonisa kufakwe isindululo ekhoyo kubunzulu kunye isindululo ulawulo yombane, waqiqa ngengcwangu noogxa bakhe. Ekugqibeleni, kwavela umsebenzi jikelele kuqala buffer esebenzayo leyo abasetyenziswa electric isiqabu umlinganiselo vana va ku tiva wagalela isenzo milenge. Inoveli electric rotary ababetheki vana uzinzile yaye agudileyo ngakumbi ngexesha wakhuph 'inyathelo, nto leyo stably kuphucula idabi entsha iimveliso kunye nobuchwepheshe of XCMG.
Enjalo wokubambisana uphando kunye nophuhliso isigcawu konke iintsapho ezahlukeneyo imveliso vana ngesanti kubunzulu baphantsi of XCMG. Kwiintsuku 8, iivelufa ezintlanu makenziwe, iiseti ezimbini ndawonye enye iseti ke bazama ... Le uphando kunye nophuhliso lwangoku ukukwazi iqela CES ngenxa kwezivalo hydraulic of XCMG. Le projekthi likhokelwa European Research Centre of XCMG kwaye kuxhaswa XCMG Heavy Machinery, XCMG hydraulics kunye XCMG Institute. -Arty abane iququzelele uphando kunye nophuhliso ndaqonda okokuqala ukuze kwezivalo hydraulic of XCMG ziyaphuculwa kakhulu kwi parameters imveliso, ezifana neendleko, ubunzima kunye nexesha impendulo, kunye nezalathisi zomsebenzi, ezifana nolawulo, ubukrelekrele kunye nesenzo stableness. Kwindlwana iinxalenye engundoqo kunye amacandelo XCMG, iimveliso ezahlukeneyo ndithi njalo ukuba kwezivalo hydraulic of XCMG leyo kwakho with "ubukrelekrele" babo i "ixilongo omtsha 'apho" epheleleyo inkqubo ngamanzi isisombululo umboneleli "uyakwazi ukuya jikelele, ezifana APVM lolayisho ezibuthathaka iyunithi ivalve ezininzi kwaye manual utshintsho vana ezo ziphuhliswe ngokukodwa kubavelisi zehlabathi shop ophum bayakwazi ukuxhathisa uvavanyo lwefuthe 250.000 kunye iimvavanyo commutation 20,000, XSV lolayisho ezinobuzaza unit ezininzi vana apho nempembelelo nitshintshe inkathazo-free ingaphezu amaxesha 1.000.000 kunye yaseYurophu ngokukhalipha-ziveliswe-e-China APV unit ezininzi vana.
Yakha "yokupasa green" with "Ugcino amandla"
Izixhobo yokuvelisa sisiseko sophuhliso loqoqosho lwesizwe kwakunye isiqinisekiso obalulekileyo uhlaziyo mveliso kunye nokuphuculwa zeteknoloji lwamashishini ezahlukeneyo. Kwiminyaka yakutshanje, ishishini lethu lemveliso noomatshini wavuka nto ibalasele ngamandla kukuba, inkqubo mveliso iye ekuphuculeni rhoqo kwaye bephuhlisa kunye ezintsha nobuchwepheshe sele ngcono ilungelo. Noko ke, okwadala ukusetyenziswa kwamandla nongcoliseko baninzi kwaye ezibalaseleyo ngakumbi. Ngokukodwa, nangenye neemfuno engqongileyo kunye nophuhliso eziphilayo kufuneka ithathelwe ingqalelo kuyilo kunye nokuveliswa lezakhelo eziphambili oomatshini yokwakha, kwaye liyemka ezithandwayo ukuba uphando nokuphuhlisa iimveliso nokusingqongileyo. Ngaloo ndlela ke ubotshiwe ukusebenzisa inxalenye kwaye icandelwana ubugcisa abakhutheleyo ukonga umbane kakhulu. Ngenxa lokuqala-class yasekhaya inxalenye kunye necandelo lwamashishini, XCMG hydraulics izibophelele ekukhawuleziseni uphando imveliso kunye nophuhliso amanyathelo, kusetyenziswe ubugcisa ubunzima ukukhanya zohlaziyo lweziqalelo hydraulic yaye lizama ukunika iinkonzo esebenzayo kunye nesisombululo inkqubo kubunzulu baphantsi komhlaba kunye nenkxaso yobuchwepheshe yokonga amandla-ngaphezulu .
"Njengoko ukukhanya-weight mveliso kukhuphiswano siye kwathatha iminyaka eliqela ukuyila, ubotshelelwe ukukhulisa engaphezulu ekuphuculeni intsebenzo yeli iinjini umlilo. Kwixesha elizayo, siza kusungula kwesesithathu iimveliso ubunzima ukukhanya jikelele yesine ukuze bazisa ngaphezulu efanelekileyo yokusebenza ukusetyenziswa kwamandla. "Le ubunzima imveliso kukhuphiswano ukukhanya ekhankanywe uMyili Chief Zhang Qingkou iimveliso ze XCMG hydraulics na umbhobho aluminium owawusisibonakude debuting kule enobulungisa bauma. Oku kunjalo yokuqala in China. Xa imveliso enjalo owanikelwa ngenxa okokuqala ngqa, bonke abathengi bachukunyiswa kwezobuchwepheshe ubunzima ukukhanya ngaphandle kokukhetha leyo eyenza kube nako kubanjwa ngesandla esinye. High amandla aluminium ingxubevange Iwendawo yinxalenye engundoqo imveliso enjalo apho ubunzima ngu 2/3 ongaphantsi kwe imibhobho rhoqo insimbi. Ngapha koko, ubuchwepheshe processing umphezulu ezizodwa kunye nobuchwepheshe inkxaso-ebomini ayasebenza. Ngenxa yoko, le mveliso inikwa kunye ephakamileyo impahla kukuwohloka umphezulu lukhuni, kulayishwa amandla ayo bathanda ukuba kuphuculwe, kwaye nobomi inkonzo kwandiswa. Ngaphezu koko, senza nje ukusetyenziswa amandla njengesakhelo esingundoqo koko kukhanya dyondzisaka, ngaloo ndlela ngokupheleleyo esusa status quo apho iinjini umlilo lwasekhaya kufuneka sithembele kumbhobho aluminium ingxubevange amazwe.
Ukusetyenziswa inxalenye kwaye icandelwana ukukhanya technology ubunzima kubalulekile ukuba yokusebenza nokulondolozwa kwamandla benqwanqwa engundoqo. Njengokuba kude njengokuba sisazi, zonke iimveliso nesilinda yiHydraulic, ezifana milenge ezahlukeneyo, bayifakwa kunye neelori impompo, ngaba iimveliso ezonga umbane novel nesilungiselelwe ngokukodwa eyenziwe ngokusekelwe ilifa zophando kunye namava lokuvelisa kunye nokwakhiwa neempawu njengesakhelo esingundoqo wangaphambili. Xa abalwazi rhoqo isakhiwo noun kunye nocazululo isicelo ubunzima ukukhanya, inkampani usebenzisa izinto inoveli ophezulu-amandla endaweni izinto cylinder zemveli ukuze senze iimveliso kubonelelwa kunye nokusebenza kakuhle ngoomatshini kunye nobugcisa. Ngoko ke, xa kuthelekiswa ne-mveliso rhoqo, ubunzima itankana epheleleyo yi-20% ngaphantsi okanye ngaphezulu. Le nkampani esa ulwalathiso kuphuhliso lwexesha elizayo iimveliso ubunzima ukukhanya.
Okwangoku, iteknoloji remanufacturing Ndinibonisile inxalenye kunye necandelo umnquba nako kubalulekile ekwakheni "yokupasa green", ezifana Velocity aphezulu oxy-fuel plasma electrolyte wokucoca. Kanye ngoku, ishishini remanufacturing kuxhaphaka ivela njenge akhawunti entsha leyo shishino oomatshini lokwakha isaphonononga ngamandla kwaye bazama kunye njengomnye ubugcisa ezingundoqo leliphi icandelo iindawo ezingundoqo kunye amacandelo XCMG igqiba ukuphuhlisa amanani aseleyo iimveliso kangangoko kakhulu. Ukuze uqonde ngokupheleleyo ixabiso savuka kwiimveliso, inkampani kumisa ngokukodwa isebe remanufacturing ukuba bagxininise zophando remanufacturing cylinder kubunzulu baphantsi komhlaba kunye nobuchwephesha ezingundoqo nokulungiswa yesondlo kwaye enze isakhelo ishishini remanufacturing kunye nenkqubo yophando technology. Ezininzi remanufacturing ukwazi ngokutyhoboza kunye neziphumo isicelo promotion, yitsho ophumelele iiprojekthi remanufacturing enkulu-yeetoni kweenkampani yentsimbi ezinkulu-abasakhasayo impumelelo imiyalelo yesondlo cylinder American kwamanye amazwe, kuye kwaba kwacaca ukuba i-imarike isithuba iye kwenye ukuphumelela zoshishino ukunyuka ingongoma nkampani.
Bona ukusebenza ukusuka 'chip ", iiyure 8000" obungenakutshatyalaliswa' ubomi inkonzo
Njengoko oomatshini yokwakha lusoloko utyando ngaphandle kwaye umngeni neemeko ezimandla ezifana storm isanti kunye ukunyakama, ngaphezu ixhomekeke ukuthembeka mveliso. Ngamanye amazwi, noba yeyiphi trend ubugcisa kwezoshishino asaphuhlayo, stableness nokuthembeka iimveliso kufuneka kusoloko umbono wethu yokuqala kumele ukuba zichithe. Oku kwakhona isifundo sokuqala ngokudibeneyo ijongana abenzi oomatshini ukwakhiwa kunye nabaniki babo inxenye inkxaso. Njengoko umgangatho legolide "ubugcisa, obungenakutshatyalaliswa" wakhutshwa, XCMG kwakhona bakhuliswe iinjongo retargeting kunye refocusing kwi ubugcisa ephambili engundoqo kunye namalungu engundoqo kunye namacandelo. Njengoko ehamba ngesanti kubunzulu baphantsi cylinder umenzi, XCMG hydraulics engenise iphepha eyanelisayo kulo mgangatho kunye iiyure 8000 yokusebenza "ukungafi".
"Bang-" Xa ukumbiwa ibharhule, kwakhiwa elinye Pilbara ummandla Australia kwakuthe ndii kwakhona. Kule ndawo kwemigodi, kufutshane ikhweyitha kunye eshushu neyomileyo, yaye apho kusoloko lobushushu yangaphandle ingaphezulu kwe-37 °, a excavator super-ezinkulu-yeetoni iye ukunganethi kuqhutywa 8000 ukusebenza nandzu-free kangangeeyure 8000. zawo kubangelwa ekukhanyeni iimveliso hydraulic of XCMG umenye-ngaphakathi. "Icala-ezamahala yexesha inkonzo iisilinda hydraulic of China nokuba awukwazi kufunyanwa kwezinye izinto zokuqala-class. Iipatsi kunye amacandelo XCMG zezi 'ubuncwane' siye uzixholele e China! "Ukuthetha yale ngumlawuli izixhobo kule ndawo kwemigodi Australian olunamagama ithemba labo iimveliso cylinder ngesanti kubunzulu baphantsi of XCMG. "NoGemariya" wathetha ngaye cylinder ngesanti kubunzulu baphantsi kwe excavator zixhonyiwe umnquba iinxalenye engundoqo kunye amacandelo XCMG. Kangangexesha elide, ngenxa yokuba uphando ophezulu kunye nophuhliso ubunzima kunye necebo processing ezintsonkothileyo, kunye neemeko zokusebenza ebuhlungu njengesakhelo esingundoqo, excavator ineemfuno ephakamileyo ukunceda kunye airtightness. Ngoko ke, loo iimveliso zithathwa ngokuba "isithsaba" phakathi iisilinda kubunzulu baphantsi komhlaba kunye uhlaziyo ngalinye phantsi kweliso elibukhali. Boom cylinder of ukumbiwa super-ezinkulu-yeetoni yabamba eli xesha zasekhaya cylinder excavator inkulu-yeetoni uphando kwaye yenziwa yi XCMG hydraulics ingqalelo basis technology ekhoyo kunye nokukwazi nezixhobo. Njengoko yimveliso engundoqo kumazwe ngamazwe wokhuphiswano amacandelwana engundoqo kunye amacandelo XCMG, isicelo lothotho izinto ezintsha, ubugcisa obutsha neendlela ezintsha esophula kuphela ngokusebenzisa ubugcisa cylinder yebhotile lwasekhaya super-elikhulu-scale excavator kodwa iphumelele isincomo ebanzi njengesakhelo esingundoqo abasebenzisi ekhaya okanye kumazwe ngamazwe. Oku kwakhona unika intsingiselo engcono ingqiqo imveliso ye "ubugcisa, ukungafi".
Ukongeza, kukho ezinye 'izinto yentsimbi "ongaqhelekanga kwindlwana kwakhona oluveza inkxaso okomeleleyo wechess" lokuqamba "ka" intshatsheli engabonakaliyo ", le nto ndiyibhalayo cylinder ezintathu efanayo ngenkangeleko, yaye, uWele njenge" triplet " , i ekhethekileyo njengesilinda-amathathu isixhobo owawusisibonakude ezilandelanayo; ngokusekelwe bakuwufunqula iimpawu multiple-Inqanaba owawusisibonakude jibs of lori-imvelaphi inyuselwa nendwe, imveliso, ngenxa nesilinda-amathathu ubeko sifana kakhulu, hayi iphucula kakhulu nje ikhono bayitwabulula iseyilana benqwanqwa ezingundoqo kodwa ubafake isakhiwo noun kunye nobuchwepheshe uhlaziyo benqwanqwa engundoqo lorry- imvelaphi inyuselwa crane; aphakathi self-utshixo, isiphelo-self-uvala cylinder yonke yoqhubekeko-self-itshixa ekugqibeleni kugqitywa nge-28 ukuphuculwa isindululo kunye neemvavanyo ngempumelelo banelise iimfuno isisu semoto eliqhuba oomatshini yokwakha, yazi idabi zeteknoloji kwimiba emininzi enjalo, njengoko uvavanyo ukuchaneka, isantya impendulo kunye ubomi inkonzo lokutshixa izahlulo ze ufakele umsantsa phakathi izinto zasekhaya kunye nemveliso evela ngaphandle ebomini inkonzo nokuthembeka eyenziweyo kule minyaka idlulileyo emininzi; iisampuli eyahlukeneyo yobugcisa ebonisa ubugcisa processing umphezulu, ubuchwepheshe ukuwelda kunye nobuchwepheshe izinto zokwenza imveliso ukunika inkxaso ezomeleleyo stableness nokuthembeka iindawo ezingundoqo kunye amacandelo XCMG, nto leyo yenza uphando basic ndlela ukufikelela kumgangatho "obungayi".
"Ngaphezu koko ukuhlola intsimi ngamanzi kunye ezintsha nobuchwepheshe, ukuphumelela namanye amazwe kunye inkonzo awongamileyo." Nangona uhlengahlengiso yabasebenzi eziziswe eziqhelekileyo elitsha loqoqosho Chinese usaqhubeka, izahlulo engundoqo kunye amacandelo XCMG ifakwe "ngenkxaso enamandla" kuye kwadala unyawo ukubuyela kudala . Njengenkokheli iinxalenye engundoqo isiphelo ophezulu kunye namacandelo of China, "iqhawe ezingabonakaliyo" of XCMG ubotshiwe 'ukufikelela encotsheni yentaba Everest ", zuza le isiphelo ophezulu idabi' unyawo chess" yaye esandul 'ukuqala ukusuka bauma China 2016 ukuya phambili ukuya ehlabathini apha kukhulula amandla ngamandla of "Made in China"!